Nbudata GIS n'efu, gịnị kpatara na ha anaghị ewu ewu? - Geofumadas
Disemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GvSIG, manifold GIS
M na-ahapụ oghere oghere ka ọ bụrụ ntụgharị; ohere maka blọọgụ agụgụ dị mkpụmkpụ, n'ihi ya, m na-akpachara anya, anyị ga-adịtụ mfe.
Mgbe anyị na-ekwu maka «ngwaọrụ GIS n'efu«, Ìgwè ndị agha abụọ pụtara: ọnụ ọgụgụ buru ibu na-ajụ ajụjụ a
... na gịnị bụ ihe ndị ahụ?
... ma enwere ndị ọrụ ha?
Ọ bụ ezie na ole na ole nọ n'akụkụ nke ọzọ, na azịza ndị dị ka:
… M na-eme ihe na-enweghị emefu ego
Nke a bụ ụfọdụ ihe mere nbudata free na-ejighị ejiji nke ọtụtụ ndị ọrụ GIS.
1 Mmụta mmụta
N'ihe banyere Ezie, inye ihe atụ, ngwá ọrụ a na-arụ ọrụ na Linux na Windows, nke nwere API na C ọma ederede, nke nwere nkuzi zuru oke, mgbe anyị lechara ya, anyị na-achọpụta na ọ na-arụ ọrụ nke ARCGis, yana ọtụtụ mgbakwunye ya nke ruru puku kwuru puku dollar.
... mana onye n’enye gi GRASS akwukwo na obodo Latin America?
Anaghị m ekwu maka ọzụzụ maka ndị mmepe, ha na-amụta naanị, na-enweghị ndị nkịtị na-ahụkarị gbasara nyocha, nhazi onyonyo, ntụgharị nke data raster ka vector ... ihe ndị ahụ GRASS na-eme nke ọma. N'ezie ị nweta ọzụzụ GRASS kwesịrị ịdị nfe, naanị ihe dịka awa iri abụọ na anọ, mana ajọ mkparịta ụka na enwere ntakịrị agụụ maka ọmụmụ ndị a pụtara na ụlọ ọrụ nyefere onwe ha ọzụzụ anaghị ahazi nnọkọ ndị a. Ka anyị ghara ikwu gbasara mmemme ndị ọzọ n'efu ma ọ bụ n'efu dịka gvSIG, mmiri, Saga ma ọ bụ Jump which are less known.
Yabụ eziokwu ahụ bụ na usoro mmụta ji jupụta ebe niile na-eme ka ndị ọrụ dị oke ọnụ ... n'otu ụzọ ahụ Linux enwere onwe ya, mana ọrụ RedHat akwadoro na-akwụ nnukwu ego.
2 Ọ dị mfe mbanye anataghị ikike karịa ịmụta
O doro anya na ESRI na AutoDesk bụ ndị a ma ama n'ihi na ndị ohi ego enyefewo ha aka ... ma ọ bụ nko. Agbanyeghị na ha siri ezigbo ike, ngwaọrụ dị iche iche ama ama nke ọma site na ụlọ ọrụ ama ama, obere ma ọ bụ ụlọ ọrụ raara onwe ha nye mpaghara eserese ahụ kwesịrị itinye ego $ 48,000 dollar na ngwaahịa ESRI naanị iji bido ngalaba mmepe 5-onye ọrụ (ArcGIS) , ARCsde, ARC Editor, ARC IMS… na-enweghị GIS Server). Ya mere, usoro ikpo okwu nke mepere emepe bụ ezigbo mma maka ụlọ ọrụ raara onwe ha nye mmepe, mana ndị ọrụ nkịtị ga-eji naanị desktọọpụ ... ha ga-etinye patch na anya, na-etinye $ 1,500 n'ịntanetị :).
3 Ọ ka mma ịga na ndị kasị ewu ewu karịa karịa kacha mma.
Anyị na-ahụ omenala a ọbụlagodi mgbe a na-etinye ego, onye ọrụ mara na Mac dị mma karịa PC, na Linux dị mma karịa Windows, na ụfọdụ ngwaọrụ CAD dị mma karịa AutoCAD; nke mere na ikpo okwu ndị a na David na Golayat na-anọgide na aka "họrọ ndị ọrụ" ndị na-akwụ ụgwọ yiri nke ahụ.
Ezie na asọmpi dị n'etiti "ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu" na nke "dị oke ọnụ", mgbidi ahụ na-agba egwu, karịa mgbe ọ bụla enwere m ndi Gentile weputara, maka iji Manifold ... ọ bụ ezie na ọ bụghị n'efu. Yabụ, anyị na-eji akụrụngwa na-efu $ 4,000 naanị iji dobe anyị Geek, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị ọrụ anaghị enye ikikere ngwanrọ, mana ụlọ ọrụ.
... na mmechi, anyị na-ahụ na ọ bụ ihe ọjọọ dị mkpa na enwere nnukwu ụlọ ọrụ, na-anapụ puku kwuru puku dọla maka ikikere ka ikike nke teknụzụ a kwụsị. Ọ ga-abụ ihe ọjọọ ọzọ dị mkpa, maka otu ga-aga n'ihu na-alụ ọgụ site n'akụkụ ghere oghe, n'agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ga-atụle ha Nerds.
Previous Post«Previous Kedu ihe AutoCAD 2008 nwere ọzọ?
Next Post Nkọwa n'etiti sava map (IMS)Next »
5 na-aza "nyiwe GIS n'efu, gịnị kpatara na ha anaghị ewu ewu?"
Na-aza ajụjụ a zitere m site na mail:
GIS na agba ọsọ na Apple:
-QGIS. Onye a wuru na C ++
-gvSIG. Ewubere na Java, ihe ejedebere na Mac n’ihi na ọ na-agba ọsọ dị ka ụdị mkpanaaka. Ojiji kacha mma dị na Linux na Windows
-Pụpe Jump. Na Java, mana tupu gvSIG a ka mma.
Nhọrọ ndị ọzọ na-agba ọsọ na Paralells, nke na-eme ka ngwa Windows na-agba ọsọ na Mac.
Jikọọ gvSIG na SEXTANTE, maka ndị na-adịghị atụ egwu Java
Jikọọ qGIS na GRASS, maka ndị na-ahọrọ C ++
Maka mmepe weebụ
GeoServer maka Java
MapServer ma ọ bụ MapGuide karịrị C ++
December, 2010 na
Ok Jc. Nzipu ozi a sitere na 2007, n'oge a anyị ahụla mmalite nke mgbanwe na-emeghe, anyị niile nwekwara atụmanya na nsonaazụ ikpeazụ ya ga-adigide.
jcmont kwuru, sị:
Echere m na ọ bụ oge nke ihe eji emeghe ka software nweta, ihe dị mkpa bụ na e nwere obodo na-emepụta ya.
N'ihe gbasara gvSIG, obodo a dị ike nke ukwuu ma ọ na-agbasa ngwa ngwa, na ọzụzụ ọzụzụ n'ọtụtụ ebe na nkwado ntanetị. Ọ bụ eziokwu na n'ihi na nnukwu ichekwa ozi usoro slows ala na eleghị anya na ArcGIS ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ proprietary software bụ mma njikere na-arụ ọrụ ka mma. Ma ajụjụ bụ otú hazie data, ie mmejuputa GIS n'ihu ọha administrations na ulo na-eto eto, na-emekarị bụ na kwa-emeputa ihe nke ozi ndị na-eru elu ya ọmụma na nke usoro na mgbe ahụ na-etinye ya na nkịtị data infrastructures, site n'imezu ụkpụrụ (WMS, WFS, wdg) nke mere na kama centralizing data on sava na ndị ọgwa na òkè ọmụma, na n'ihi na-arụ, na-emeghe iyi software, dịka gvSIG, edere na Java, ọ bụrụ na ọ bara uru.
M na-atụkwasị obi na nkwụ na ngwanrọ na-emepe emepe, n'ihi na n'ụdị ndị ọzọ, ọ na-ewepụ ala site na ngwanrọ nke ụlọ ọrụ, (kpuchie dịka Drupal, CMS WordPress, elgg, wdg.)
Ọdịnihu ga-adị na njikọta na ntinye nke ngwanrọ na-emepe emepe, na njedebe Richard Stallman ga-abụ ihe ziri ezi.
December, 2007 na
Daalụ maka nkọwa Alvaro
Otu isi, SPRING bụ n'efu, ọ bụghị n'efu.